Izvozvi zvave kugona kugadzira GitHub dhonza zvikumbiro mu Visual Studio Code | Linux Vakapindwa muropa
Mune chinyorwa chakapfuura, takataura nezvenhau nyowani dze , que GitHub inokutendera kuti iwe ugadzire isingaverengeke nhamba yeakavanzika reposheni nehurukuro yavo yeGitHub Yemahara.
Ichi chiziviso, pakati pezvimwe zvakawanda zvakaitwa mumwedzi yapfuura, zvinoita kunge mhedzisiro yekutora kweMicrosoft yeGitHub.
Kuvhiya kunovavarira kwete kungo mhanyisa kugamuchirwa kweiyo sosi kodhi kuchinjana chikuva mubhizinesi, asiwo kuunza zvigadzirwa zveMicrosoft kumisika mitsva.
Iwo makambani maviri akavimbisawo kubatanidza zvigadzirwa zvavo kuti vape vanogadzira uye mabhizinesi neinowanikwa sosi kodhi yekugovana uye zviitiko zvekushandira pamwe.
Y Izvi zvakatanga kuumbika, mukati memwedzi waGunyana wapfuura apo Microsoft yakazivisa Azure Mapombi(inosanganisa nyowani uye Inopfuurira Kuendesa (CI / CD) sevhisi yakavakirwa paGitHub) uye neruzhinji rwekutarisa kweGitHub Pull Zvikumbiro (PR) yekuwedzera yeVisual Studio Code.
Isu tinofanirwa kusimbisa kuti zvikumbiro zvekudhonza zvinoshandiswa nemubatanidzwa kana yakavhurwa sosi mapurojekiti ekutsigira zvigamba kana zvitsva maficha.
1 Microsoft inoda kubatanidza zvigadzirwa zvayo
1.1 Nezve VS Code Dhonza Zvikumbiro
Microsoft inoda kubatanidza zvigadzirwa zvayo
Nekuwedzera ukuMicrosoft inopa chiitiko chitsva chekukumbira manejimendi kune Vashandisi veStudio Studio
Kuvabvumidza kuti vashande pamwe chete, vataure pamusoro pazvo, vadzokorore, uye vadzikise GitHub PR chaipo kubva kumugadziri wekodhi
Seimwe yeakanyanya maficha, inokutendera kuti ubvumikise uye ubatanidze kodhi mhariri kuGitHub uye nekudaro ukwanise kunyora uye kufambisa maPR kubva kuVisual Studio Code.
Pakati peimwe mikana, kusanganisa kwekupedzisira kuchiri kupihwa kuitira kuti iyo Visual Studio kodhi interface uye yekuraira maturusi tambo senge git inogona kugarisana.
Uku kuwedzera kweVS Code kunouya, sekutsanangura kweMicrosoft, kuzadza maturo mukufambiswa kwebasa kunosangana nemaminjiniya mazuva ese.
Kuisa mukaha uyu mumaonero, Microsoft yakadzokorora chiitiko chekukumbira nhasi:
"Nhasi, kana tichiongorora kodhi yekodhi, vazhinji vedu tinomanikidzwa kurega vapepeti vedu vachishandisa dandemutande rakareruka kana chishandiso chechitatu-chedzidzo chinoratidza shanduko mune imwe mhariri.
Izvi zvinokutendera iwe kuti uwane muongororwo weshanduko, asi nguva zhinji iwe hauna mamiriro azere ekuti shanduko dzakaitwa sei uye kuti dzinokanganisa sei kodhi yekodhi yakakomberedza.
Kunze kwenzvimbo yako yakajairika yekukodha, hauna nzira pfupi dzekubhodhi, madingindira aunofarira, uye maitiro.
Zvakaipisisa, izvi zvinoreva kuti hauna nharaunda yekufamba kuburikidza nekodhi kodhi uye uone kuti shanduko dzauri kuongorora dziri kushanda nemazvo. «
Nezve VS Code Dhonza Zvikumbiro
Kubva kuburitswa kweruzhinji rwekutanga ruzhinji rweGitHub PR yeVisual Studio Code, Microsoft yagadzirisa zvakawanda pachigadzirwa chayo.
Uye seGitHub pane yayo yepamutemo blog, Iine yazvino vhezheni yekuwedzera izvozvi zvave kugona kugadzira GitHub dhonza zvikumbiro zvakananga muVisual Studio Code uye kwete kungo maneja kubva kune iyo kodhi mupepeti.
Kugadzira kudhonza zvikumbiro muVS Code, zvakapusa mushandisi anofanira kusimuka pamusoro pemusoro unoti "GitHub Dhonza Zvikumbiro" uye tinya pane + chiratidzo.
Wobva wasarudza rakanangwa bazi rekudhonza chikumbiro uye rova ​​"pinda" kuvhura yako RP.
VS Code Dhonza Zvikumbiro zvinopa zvimwe zvakawanda zvidiki zvekuvandudza zvaunogona kuona mune zvekuburitsa manotsi anowanikwa mune yeprojekiti repository.
Iwe unogona zvakare, paGitHub, kurodha yazvino vhezheni yekuwedzera. Ziva kuti VS kodhi yekudhonza zvikumbiro inogona zvakare kuiswa kana kuvandudzwa zvakananga kubva kuVS Code.
Kuwedzera pakukwanisa kugadzira dhizaini ikozvino, ine yazvino vhezheni yeiyo zvekuona nemeso Studio Code, unogona kuratidza shanduko kune zvakataurwa uye nekutarisa kuongororwa kwehutano kune imwe RP.
Nezve mazano pamusoro pekushandurwa kwekodhi, unogona kuvasiya semakoment ane diff inoratidza kodhi yazvino padhuze neshanduko dzakurudzirwa.
Mazano anogona kushandiswa nyore nyore nekusarudza Nyorera Patch kuti isimbise iyo nyowani kodhi chigamba.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezvazvo unogona kushanyira inotevera GitHub chinyorwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » GitHub kudhonza zvikumbiro izvozvi zvinogona kugadzirwa mu Visual Studio Code